E-Book for Bikram: लोग्नेमान्छे मात्र किन माथि ?
हिजो एक जना नेताले भने, “जनता र आइमाई भनेका एकै हुन् । मन पर्‍यो भने धनसम्पत्ति त के सम्पूर्ण कुरा दिन, समपर्ण गर्न तयार हुन्छन् अनि मन परेन भने तिनीहरूबाट अलिकति फुस्काउन त के ती जस्ता खतरनाक र घातक जङ्गलको बाघ पनि हुँदैन ।”
त्यसो भन्दैगर्दा मन्त्रीसमेत भइसकेका ती सांसदको अनुहार चम्किलो र गर्वपूर्णभावले भरिएको थियो । हुन त उनले यसो भन्दा नजिकै बसिरहेकी मप्रति लक्षित गर्दै हाँस्तै भनेका थिए, “अन्यथा नलिनुहोस है, तपाईँलाई चाहिँ भनेको होइन ।” सुन्नेहरू हाँसे, म पनि हाँसे । उक्ति मलाई उनको मौलिकजस्तो लाग्यो । उनले त्यो कुरा आफ्नो चुनावक्षेत्रका बाढीपीडित जनतालाई खाद्यान्न बाँड्न जिल्ला जाने कार्यक्रमअघि कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन पक्षको सावधानी र सचेतना अपनाउन निर्देशन दिँदै भनेका थिए । किनकि चुनाव आइरहेछ । अहिले, यस बेला जनतालाई राह्रत दिनुभन्दा पनि उनीहरूको भावना र मन जित्नु आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले जनतासित व्यवहार गर्दा सावधानी अपनाउनु स्वाभाविक छ ।
धेरै मान्छे भन्ने गर्छन्- ती अविवाहित नेताले स्त्री-धन र शरीरको राम्रो जानकारी राखेका छन् । रहर र महत्वाकाङ्क्षाका प्रत्येक खुड्किलो उक्लिन आइमाईहरूका कुम समाएका छन्, जीवनभर समाइरहन्छन् । तर पनि उनी कति निघृणी र कृतघ्न रहेछन्, आइमाईका बारेमा नहिचकिचाई त्यो भन्न सक्तछन् । र, त्यस्तो धारणा राख्नेहरूको संख्या हाम्रो समाजमा कम पनि छैन ।
केही दिनअघि एक जना साहित्यकार मित्रले एउटा सानो जमघटमा एउटा प्रसङ्ग झिके, “आठ-दस वर्ष बढी उमेरकी आइमाईसितको शारीरिक सम्बन्ध कस्तो हुन्छ होला ? के त्यो स्वाभाविक हुन्छ ?” उनको आशय के त्यसले पूर्णसन्तुष्टि प्रदान गर्न सक्छ ? भनेजस्तो मलाई लाग्यो । त्यसबेला सायद उनी कथाको प्लट सोचिरहेका थिए र स्वाभाविकता ल्याउन त्यसबारे जान्न चाहन्थे । उनका कुरा सुनेर मलाई एकछिन त रिस पनि उठ्यो । मैले अलि अपमानित पनि अनुभव गरेँ । भनेँ, “के पुरुषले स्त्रीको बारेमा त्यसरी नै कहिल्यै सोच्ने गर्छ ? आठ-दस वर्ष फरकको त के कुरा चालीस वर्षको पुरुष पनि अठार वर्षकी केटीसित सम्पर्क कायम गर्नुलाई स्वाभाविक र न्यायसङ्गत ठान्छ । त्यस किसिमको उमेरको अन्तरले स्त्रीलाई कस्तो अनुभव हुन्छ ? ऊ आनन्दित हुन सक्छे या सक्दिन ? के उसले कहिल्यै यसतर्फ विचार गरेको छ ? अशिक्षित र गाउँलेहरू मात्र होइन शिक्षित र सहरियाहरू पनि धेरैजसो बिहे गर्दा केटीको उमेर आफ्नोभन्दा कमै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्तछन् । दस वर्षको अन्तरलाई स्वाभाविकमा होइन, उपयुक्त ठान्छन् । तर दुई-चार वर्ष मात्र पनि केटी जेठी छ भने बिहे गर्न सङ्कोच मान्छन् र नकारात्मक जवाफ दिन्छन् ।”
Posted by Bikram Lohar at 11:53:00 AM